Caasimaddii Puntland reer Faroole ayeey u afduuban tahay | allsanaag
Caasimaddii Puntland reer Faroole ayeey u afduuban tahay
Caasimadda Puntland Qoyska reer Faroole iyo koox taageersan ayeey u afduuban tahay,
Xiildhibaan Cabdiraxmaan Faroole , oo fursad siyaasadeed Soomaalida dhexdeeda kaga helay waqtigii Cabdulaahi Yuusuf iyo reer Qardho is hayeen, maantana Soomali dhexdeeda markii ay isaga iyo Cabdi Qaybdiid u wada tartameen gudoomiyaha Guddiga Dasruuka Soomaaliya ee Aqalka sare, Soomaalida inteeda badani ay u codeeyeen in Gudoomoya Guddiga dastuurku Soomaaliya uu noqdo Cabdi Qaybdiid ayaa marka uu Garoowe yimaado wuxuu noqdaa Baarqab ku gabanaya Caasimadda Puntland oo ay beeshiisu degto . Hase ahaatee markii horeba ayna beelaha Puntland ku wada heshiin halkay caasimaddu noqonayso
Cabdiraxmaan Faroole, ayaa wuxuu sharci ka dhigtay in Islaanka beeshiisa maahee aanu Isim kale oo reer Puntland ah uuna shir Garowe ka dhacaya Furi ama xiri karin . Waana sababta doorashaddii dhowayd loogu arki waayey Boqorka beelaha Soomaaliyeed iyo Isimimka beelaa Harti,
Cabdiraxmaan Faroole iyo Qoyskiisa oo habeenkii doorashada fadhiyey safka hore oo ay kamaraddu qabanaysay ayaa hadda la sheegayaa in maamulka cabsi ay ka qabeen halkaa loo fariisiyey.
Cabdiracmaan Faroole labo Cudur ayaa isgu darsamay Mid waa Xoolo jeceyl oo waa lacag iyo Aduunyo-doon. Midda kale waa dabeecad xunyahay
Sannadku markuu ahaa 2005 ayey ahayd markii Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga isagoo ah C/raxmaan Faroole isku qabteen Cadde Muuse oo xilligaas ahaa Madaxweynaha Puntland saxiixa Shirkad baaritaan iyo sahmin ku sameynaysa khayraadka macadinta iyo batroolka deegaannada Puntland; taasoo C/raxmaan Faroole sida warar hoose sheegayaan uu ka dhex arki waayey heshiiska dano dhaqaale oo uu markaas ku qoonsaday.
Wixii xilligaasi ka dambeeyey wuxuu bilaabay inuu ka horyimaado wax walba oo danta Nugaal ah oo Dowladda doonaysay in ay ka fuliso, isagoo markii dambe ku waayey xilkii Wasiirnimo khilaaf Baarlmaanka ka dhex abuurmay Codad la doonayey in lagu ansixiyo wasiirnimadiisa, isagoo uu weheliyey Wasiirkii Arrimaha Gudaha waqtigaasi, Axmed Cabdi Xaabsade.
Xanaaqii iyo ciilkii uu u qabay Baarlamaanka wuxuu sababay inuu isku dayey C/raxmaan Faroole weerar ku soo ekeysiiyo barqo cad Hoolkii Baarlamaanka ku shiri jireen oo xiligaasi ay rasaas ku fureen maleeshiyo ka amar qaadan jirtay Faroole.
Balse qasaarihii ka dhashay weerarki Faroole wuxuu noqday in rag ehelkiisa ah ay ku dhintaan, oo ciidamada Puntland difacaan Ammaanka Hoolka Baarlamaanka Puntland.
Sawirka hoose waa Ina Faroole iyo madaxweynaha cusub
Ugu danbayntii madaxweynaha Cusub ee Puntland Siciid Deni, waxaan talo ku siinaynaa in noocaas ah oo ku caan baxay kala qaybinta umadda walaalaha ah ee reer Puntland ,Ciyaal aan khayr qabin oo uu dhalayna ay la taliyaan inuuna talo ka qaadan, loona arag inay xulafo yihiin.
← Bidhaan oo bidhaamiyey shirkado ay shatiyo siiyeen Islaan Bashiir islaan Cabdille oo Muqdisho gaaray →
5 thoughts on “Caasimaddii Puntland reer Faroole ayeey u afduuban tahay”
Abdi January 13, 2019 at 11:30 pm
Faroola waa morayaan
Waa in isolation lugu samayaa
Calmadow January 14, 2019 at 1:45 am
Faroole waa ciise maxamud garowe ciise maxamud baa leh wiilkiisa hada madaxweynah cusub masual ka ah sidii wiil yar dhalaye ayuu madax u salaxayeye wiilka faroole dani la doortaye 5 sano soo socota garoowe ku maamuli doona!!
Gabar Harti January 14, 2019 at 4:18 am
Faroole iyo inta lamidka ah Allaha ka qabto wadanka.
Dahir January 14, 2019 at 6:10 pm
Haddi Deni uu xil u dhiibo inna Faroole waa kalsooni xumo ba’an oo soo wajahday Madaweynahha cusun ee Puntland. Taasna waxaa loo fahmayaa in Dani uu taageerada uu ka iibsaday Faroole.
FAAHIYE FARAS January 14, 2019 at 6:14 pm
Calmadow bowe Dani waa Cismaan maxamuud mana jiro Somali sanku neefle ah oo ka laandheer mana ahan nin la xakumo ee waa nin dadka edeb bara waana la arki doonaa halka uu mariyo reer badiyaha ciise riyoole ee aan xishoon hadii loo baahdana caasimada waa la bedeli karaa ee ogow, ogowna hadaad Growe leedahay nin walbaa magaalo ayuu leeyahay ka istiraatijiyaysan kana qiimibadan tuulada xasbahale.